Kiniiniyada Android: wararka, xanta, tijaabooyinka iyo inbadan! - Androidsis | Androidsis
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka heli karnaa xarumo waaweyn iyo ganacsiyada yaryar ee la xiriira alaabada tiknoolajiyada, tiro aad u tiro badan oo kiniiniyada Android ah, kuwa elektaroonigga Android kuwaas oo naga caawiya maalin kasta raadinta daal la'aanta ah ee alaabada iyo macluumaadka la xiriira nolol maalmeedkeena, tan iyo markii Internetka iyo wax kasta oo la xiriira ay noqdeen meel adag. Taasi waa sababta halkan waxaad ka heli kartaa qaababka kala duwan ee Kiniiniyada Android, Sida Samsung Galaxy Tab, oo aan laga adkaan karin qaybteeda kiniiniyada, oo leh qalab-karti sare iyo xusuusta RAM-ka ugu fiican.
Kiniiniyada ugu fiican ee leh Android
Haddii aad rabto inaad la socoto wararka ugu dambeeya ee kiniiniyada leh Android sida nidaamka hawlgalka, hoosta waxaad ka heli doontaa qayb leh dhammaan wararka, xanta iyo tijaabooyinka moodooyinka ugu dambeeyay.
On Maarso 19, Maalinta Aabbaha waxaa loo dabaaldegaa, maalin fantastik ah in lala dabaaldego qoyskeena iyo ...
Bilaabidda soo socota ee Galaxy Tab A7 Lite ayaa la xaqiijiyay
Bishii Sebtember ee la soo dhaafay, Samsung waxay soo saartay Galaxy Tab A7, oo ah kaniiniyada ugu dhaqaalaha badan ee laga helo shirkadda weyn ee Kuuriya….
Mar labaad, ragga ka tirsan Samsung waxay muujinayaan in shirkadda xiisaha ay u leedahay cusboonaysiinta taleefannadooda ay ...
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah oo baahidoodu aysan u soo marin adeegsiga teknolojiyadda ugu horumarsan ee processor-rada la heli karo xilligaas ...
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition ayaa ka muuqata bogga soo saaraha
Taxanaha cusub ee kiniiniyada Samsung waxay umuuqdaan kuwa aad ugusoo dhawaaday sidii lafilayay, dhamaan kadib markii magaca lasoo muuqday ...
Axada soo socota waa Maalinta Jacaylka, waa maalin ku habboon in la cusbooneysiiyo kuwa ugu badan ...
Lenovo Tab P11 waxaa loo soo bandhigay guddi 2K ah, Office suite iyo Android 10
Soo saaraha caanka ah ee Lenovo ayaa ku dhawaaqay kiniin cusub oo loogu talagalay suuqa Aasiya oo leh magaca Tab P11,…
Laba maalmood gudahood ayaa Saddexda Xikmadle iman doonaan, haddii ay dhacdo sannadka cusub ka dib, weli maadan is siinin naftaada ...
by Ignacio Sala samee Bilaha 9 .
Haa, si sax ah ayaad u aqrisay. Waxaan ka hadlayaa Galaxy Tab S2, oo ah kiniin suuqa ku dhacay 5 sano ka hor ...
by Nerea Pereira samee Bilaha 9 .
Halloween wuxuu ku dhow yahay geeska. Oktoobar 31st, a ...
Hadda waad ku raaxeysan kartaa Fortnite 90 Hz haddii aad leedahay Galaxy Tab S7 ama S7 +
by Ignacio Sala samee Bilaha 10 .
Iyadoo aan loo eegin dagaalka ay Ciyaaraha Epic wajahayaan Apple badanaa, dagaal sida ...
Soo qaado kaniiniga cajiibka ah ee Alldocube X kaliya $ 219
Samsung Galaxy Tab S4 waxaa la soo bandhigi lahaa 1da Ogosto
Windows 10-style Launcher ee kiniiniyada Android
Onda V919 AIR DualOS, waxaan falanqeyneynaa kiniin DualOS ah oo xoog leh qiimo qosol leh